Ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety dia nampahafantatra ny fomba fijery mahomby amin'ny famerenana ny fizahantany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety dia nampahafantatra ny fomba fijery mahomby amin'ny famerenana ny fizahantany
positive outlook for travel recovery and a return to travel journalism
Fandrarana ny sidina sy ny fanidiana ny firenena rehetra noho ny Covid-19 nametraka ny ankamaroan'ny hetsika fitsangatsanganana manerana an'izao tontolo izao - ao anatin'izany ny fanaovana tatitra momba ny dia. Na izany aza, fanadihadiana iray vaovao nataon'ny mpanao gazety momba ny fizahantany manerantany dia manambara ny fomba fijery miabo amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fiverenan'ny asa fanaovan-gazety momba ny dia.
Ny fitsapan-kevitr'ireo mpanao gazety mpitsangatsangana 300 eran-tany notarihin'ny FINN Partners, orinasam-pifandraisana manerantany miaraka amin'ireo birao fanazaran-tena momba ny fitsangatsanganana any Etazonia, UK ary Azia, dia mampiseho fa ny 83 isan-jaton'ireo valintenin'ny haino aman-jery dia manohy mitady ny votoatin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena avy amin'ireo antokon'ny fizahantany. Ny areti-mifindra dia nahita ny lohahevitry ny fahasalamana nandray ivon-toerana, ka 51 isanjato no mitady fampahalalana momba ny fahasalamana sy fahasalamana. Ny dia maharitra dia mitohy ho lohahevitra mafana miaraka amin'ny 49 isan-jato izay maneho fahalianana amin'ny tantara momba ny tontolo iainana sy ny endrika tontolo iainana ankoatry ny fepetra hafa. Ny fangatahana tombanana ho an'ny dia dia 73 isan-jaton'ireo mpamaly liana amin'ny fandrakofana ny tantara afovoany, ny 60 isan-jato dia mazoto handrakotra ny fisokafan'ny trano fandraisam-bahiny vaovao, ary ny 95 isan-jato dia vonona hanao dia an-gazety raha vao esorina ny fandraràna ny fitsangatsanganana.
Azia, Etazonia ary Angletera dia niaina ny areti-mandringana tamin'ny dingana samihafa, ary ny valin'ny fanadihadiana dia hita taratra amin'ny fahavononan'ny faritra samihafa hamindra:
· Ny mpanao gazety monina any Azia sy Etazonia dia liana bebe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny dia sy ny fifanarahana (31 isan-jato ary 34 isan-jato) raha ampitahaina amin'ireo mpiara-miasa aminy anglisy (14 isan-jato).
· Mikasika ny fandrakofana momba ny dia telo volana izao, ny mpanao gazety monina any Azia dia mijery lavitra any amin'ny toerana misy ny firenena iraisam-pirenena raha toa kosa ny haino aman-jery monina any Etazonia sy Angletera mifidy ny hijanona akaiky kokoa ny trano ary hanakona ireo toerana onenana sy isam-paritra. Ny 13 isan-jaton'ny haino aman-jery amerikana ihany no maniry hahazo famoahana gazety avy amin'ny fikambanana fitsangatsanganana an-dranomasina, ao anatin'izany ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, hotely, birao fizahan-tany ary ireo manintona.
· Aleon'ny media ihany koa ny handrakotra ireo toerana mitokana tsy misy olona ambany.
Ny fanadihadiana dia natao niaraka tamina webinar "Future of Travel Journalism" izay natolotry ny FINN Partners miaraka amin'ny haino aman-jery mpitsangatsangana iraisampirenena. Ny fizotrany lehibe amin'ny webinar dia misy:
· Miroborobo ny asa fanaovan-gazety momba ny dia - mangetaheta votoaty ny olona ary mitady ny torolàlana ho an'ny media mihoatra ny taloha.
· Ny tanjona dia hitarika ny famerenana ny dia amin'ny ambaratonga lehibe kokoa noho ny sehatry ny indostria hafa.
Ny fitsangatsanganana an-trano dia hiaina fifohazam-panahy - manalavitra azy ara-tsosialy izany; ary ny fahana mividy fiarovana sy toerana malalaka.
Ny fiaraha-miasa amin'ny sambo fitsangantsanganana amin'ny fenitra henjana dia hanampy amin'ny famerenana ny fahatokisan'ny mpanjifa amin'ny fitsangantsanganana.
Ny fitsangatsanganana amin'ny ho avy dia fitambaran'ny fampifandraisana sy fifandraisana indray rehefa mitady fampiononana miaraka amin'ny fifandraisana ara-tsosialy ny olona.
Ny fitohanana sy ny fitsangatsanganana misy saina dia ho lasa zava-dehibe kokoa noho ny dia amin'ny lisitry ny siny.
Ny fanenomana ny atiny mandresy lahatra fa tsy ny fifanarahana sy ny fihenam-bidy dia hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny familiana ny safidin'ny dia amin'ny dingana fanarenana areti-mandringana.